रुहाउने दु’र्घटना: मिनीबसको ठ’क्करबाट एक मोटरसाइकल चालक दिपेन्द्रको मु’त्यु !! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/रुहाउने दु’र्घटना: मिनीबसको ठ’क्करबाट एक मोटरसाइकल चालक दिपेन्द्रको मु’त्यु !!
मिनीबसको ठ’क्करबाट घा’इते भएका अधिकारीलाई हेटौँडास्थित चुरेहिल अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृ’त्यु भएको बताइएको छ । मिनीबस र चालक प्रहरी नियन्त्रणमा छन् । अधिकारी मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाको कार्यालयमा इन्जिनियर पदमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो ।
मृ’तक को’रोना स’ङ्क्रमित रहेको र होमआइसोलेशनका लागि घर जानेक्रममा मिनीबसको ठ’क्करबाट मृ’त्यु भएको गाउँपालिका अध्यक्ष दामोदर खनालले बताउनुभयो । उनी पालिकामा अत्यन्तै लोकप्रिय थिए । अत्यन्तै मिलनसार र मिजाशीलो स्वभावका इन्जिनियर अधिकारीको अल्पआयुमा नै नि’धन भयो ।
पोखरास्थित पश्चिमाञ्चल अस्पतालमा संक्रमित महिलाले जन्माइन् स्वस्थ शिशु
काभ्रेपलाञ्चोकमा कोरोना बढ्दै गएपछि तीन सरकारी कार्यालयको सेवा आजदेखि बन्द